Hetsipanoherana “Black Lives Matter” tao Trinidad & Tobago nitarika nankany amin’ny resaka foko · Global Voices teny Malagasy
Mbola aloka lavabe ireo fotodrafitrasa maneho tsy fitoviana
Voadika ny 21 Jona 2020 16:24 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Italiano, Français, Ελληνικά, Nederlands, русский, عربي, English
Mpanao hetsika “Black Lives Matter” (Misy Vidiny ny Ain'ny Mainty Hoditra) tao amin'ny tanànan'ny Seranan'i Espaina, Trinidad, 8 Jona 2020. Sary an'i Jada Steuart, nahazoana alàlana.
Vanja nandrehitra ny afo namerina indray ny tebitebin'ny hetsika “Black Lives Matter (BLM)” ho eny anoloan'ny sehatra ilay famonoana nahatsiravina nanjo an'i George Floyd, Afrikàna Amerikàna iray maty sempotra tany Minneapolis, Minnesota, ny 25 May noho ny nanindrian'ny polisy fotsy hoditra ny tendany.
Ireo mpanao hetsipanoherana nandritra ilay hetsika faharoa “BLM” natao tao amin'ny Kianja Queen's Park Savannah tao an-tSeranan'i Espaina, Trinidad. Sary an'i Ashley Thompson, nahazoana alàlana
Ny tanjona kendren'ny BLM, mba hanentana hanoherana ny herisetra sy ny fankahalàna tsotra izao ny mainty hoditra, izay miseho amin'ny endrika mampididozan'ny herisetran'ny polisy, dia lasa aingampanahy ho anà hetsika hafa mitovitovy aminy nanerana izao tontolo izao.
Ny 8 Jona, nihoatra ny 500 ireo olona tonga naneho firaisankina tamin'ny #BlackLivesMatter tamin'ny alàlan'ny fanaovana fihetsiketsehana nanoloana ny Masoivoho Amerikàna tao an-tSeranan'i Espaina. Io no hetsi-bahoaka faharoa momba io olana io tao anatin'ny efatra andro, fa ity farany ity no naharaisana tatitra ho ny namay kokoa noho ireo teo alohany, na misy ampahany sasany ao anaty fiarahamonina aza mbola manohitra ilay tolona.
“Rehefa tsy misy ny rariny, tsy misy ny fandriampahalemana,” ireo no teny nanakoako teny amin'ireo mpanao hetsipanoherana nifamotoana tao amin'ny Queen's Park Savannah. Nanangana ny totohondriny teny ivelan'ny fitaratry ny fiarany ireo mpamily nandalo teny amin'ny manodidina ilay kianja maintso lehibe ao an-tanàna, nampaneno ny anjomarany, ary nihiaka ny teny faneva hoe “Black Lives Matter” ho fanehoana firaisankina, tsy amin'ireo Afrikàna Amerikàna fotsiny ihany, fa koa ho fanekana fa mbola misy fanavakavahana mifàka lalina sy mitoetra miafina ao anaty soson'ny fiarahamonina maro kolontsaina ao Trinidad&Tobago.
Na nisy aza ny fifandonana tamin'ny polisy, indrindra noho ny tsy fisian'ny fanomezana alàlana manamboninahitra iray haka sary ireo mpanao hetsipanoherana, dia tam-pilaminana sy nirindra ny hetsika. Tamin'ny ankapobeny, najain'ireo mpanao hetsipanoherana ireo fepetra momba ny elanelana sôsialy, izay mbola nohamafisin'ireo polisy nanatrika teny.
Ny zavanisy dia nandany fotoana elaela ny ambasadaoro amerikàna, Joseph Mondello, niresahana tamin'ireo mpanao hetsipanoherana. Noarahabainy ireo olona tsirairay tonga nampita ny hafatra — sy noho ny nitondran'izy ireo ny arontava ary nanajàn-dry zareo tsara ny elanelana sôsialy.
Mpanao fihetsiketsehana “Black Lives Matter” tao an-tSeranan'i Espaina, Trinidad, 8 Jona 2020. Sary an'i Jada Steuart, nahazoana alàlana.
Anatin'ny dindon'ny fahafatesan'i Floyd, nibahana toerana tao amin'ny media sôsialy tao Trinidad&Tobago ny adihevitra momba ny fanavakavahana foko, menaka vao mainka nandrehitra izany ireo fanamarihana saropady nataon'ireo tompona orinasa toa an'i Gerald Aboud, izay notsarain'ny maro ho fanavakavahana foko ny fanehoankeviny tao amin'ny Facebook, tamin'ny nilazàny ireo mainty hoditra ho olona mila manova toetsaina. Ny fihetsika bemarenina tsy nitsahatra nasehon'i Aboud sy ireo maro hafa dia nitarika ho amin'ny antso hanaovana ankivy ny fandraharahan-dry zareo, ny fanapahankevitra avy amin'ireo mainty hoditra mpandraharaha hanaisotra ny vokatr'izy ireny tsy ho hita eny anatin'ny toerampivarotan-dry zareo ary ny famoronana lisitra ahitàna ireo fandraharahana tantanina mainty hoditra nozaraina tety anivon'ny media sôsialy.
Im-betsaka ny anaran'i Aboud no hita tamin'ireo takelaka sy sorabaventy tamin'ilay hetsipanoherana :
Mivaky toy izao ilay takelaka, “Atoa Gerald Aboud, tsy nangalarina akory ny sneakers anaovako. Am-pitiavana, ‘Ilay Mainty.’ Sary an'i Jada Steuart, nahazoana alàlalana.
Anatina firenena iray milaza ho misy firaisana sy fitoviana — ny hirampirenena, rahateo, milaza hoe “Eto, mitovy daholo ny finoana tsirairay sy ny foko tsirairay” — dia mahalaza ny halehiben'ny hetsika #BlackLivesMatter ny valinteny tahaka izany.
Na izany aza, tsy misy iadiana hevitra ny hoe miroborobo ao Trinidad&Tobago ny fanavakavahana, amin'ny fomba maro samihafa: fihenjanana ara-pirazanana mifononofo, na indraindray mivandravandra be eo amin'ireo foko, fanavakavahana tohanan'ny andrimpanjakana izay hatrizay no manao izay hahasarotra ny firoboroboana ara-toekaren'ny mainty hoditra, ary ny zavamisy hoe ny ankamaroan'ny harena ao amin'ny firenena dia iray isanjaton'ny vahoaka ihany no mitazona azy.
Mpanao fihetsiketsehana mijoro amin'ny tongotra hazo, manome voninahitra an'i Moko Jumbie, ilay endrika malazan'ny Fetibe ao Trinidad&Tobago (fombandrazana avy any Afrika Andrefana), nandritra ny hetsika “Black Lives Matter” tao an-tSeranan'i Espaina, Trinidad, 8 Jona 2020. Sary an'i Jada Steuart, nahazoana alàlana.
Amin'ny maha-fiarahamonina nandalo fanjanahana azy, ampahany tsy afa-misaraka amin'ny tantaran'i Trinidad&Tobago ny olan'ny fanavakavahana; mety nitety andian-taranaka maro ny toetsaina mpanavakavaka.
Ohatra iray amin'io ilay Fetiben'i Trinidad&Tobago, izay tsy isalasalàna fa ny fetibe goavana indrindra ao amin'ilay firenena. Na toa mitovy aminà fetibe an-dalambe feno firavoravoana aza ny endrika maoderina ananany, mbola mijanona ho voasamantsamaky ny saranga sy volonkoditra ihany ny tarika sasany mpandray anjara amin'ilay Fetibe. Ny fototra niavian'ilay fetibe dia nifàka lalina tany anatin'ny fihokoana nanoherana ireo manampahefana mpanjanaka.
Tsy rava tanteraka ireo rafitra mitanila nolovainy tamin'i Angletera taorian'ny nahazoany fahaleovantena. Maro amin'ireo fotodrafitrasa no mbola aloka lavabe sy mavesatra avy amin'ny fiainan'ireo Mainty Hoditra, saingy raha tsaraintsika avy amin'ny fandraisana anjara tamin'ilay hetsika tamin'ny 8 Jona teo, toa tsy vonona intsony ireo tanora ny hanao mody tsy mahita ny zavamisy.
Raha taranaka Afrikàna ny maro tamin'ireo nanao hetsika, nisy ihany koa olona hafa fihodirana sy Trinidadiàna fotsy hoditra tonga nanohana, tonga niaraka nanatevina ireo hetsika erantany nikendrena hankaharana ny rafitra izay mikolokolo sy mitàna ny familiana miteraka fanavakavahana.
Mampiteny ny feony sy ny volan-dry zareo izy ireo, ary toa vonona ny hiatrika adihevitra henjana nefa ilaina mba hisian'ny tena fitoviana. Marobe ihany koa ireo nizara fitaovana, nampianatra ny hafa momba ny tantaran'ny mainty hoditra mba hisian'ny fahatakarana bebe kokoa :
Vakin'ny hafatra etsy anaty instagram
Arahaba ry vahoaka Karaibiàna, ?? Ny hetsika “Black Lives Matter” dia natao indrindra ho antsika, ary tianay ny hizara ny antony! Iangaviana ianareo haka fotoana kely hamaky ity hafatra ity ary hirotsaka hanolo-tena miaraka amin'ny fitaovana nataonay lisitra!. Manantena antsika rehetra ho anaty filaminana tsy misy tomika. Fitiavana iray ❤️
Adihevitra efa hatry ny elabe io